DEG DEG:-Diyaarad kusoo dhacday Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha GudahaDEG DEG:-Diyaarad kusoo dhacday Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho
DEG DEG:-Diyaarad kusoo dhacday Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho
War Goordhow na soo gaaray ayaa waxaa uu sheegayaa in Shil diyaaradeed uu ka dhacay dhabbaha diyaaraduhu kasoo degaan kana kacaan ee Garoonka diyaaradaha Aadn Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Diyaarada kusoo dhacday Garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa la sheegay inay aheyd nooca Xamuulka qaado,kadib markii ay luga u bixi waayeen.
Sidoo kale waxaa la xiray dhabbaha diyaaraduhu kasoo degaan kana kacaan ee Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayaan in diyaarada soo dhacday wax dad ah aysan la socon,isla markaana waxaa siday xamuul oo weli wax faah faahin laga bixin.
Wasiir Cabdi Cashuur oo soo saaray War farxad galiyay Shacabka Soomaaliyeed
Safarkii Madaxweynaha Puntland ee Kismaayo oo sabab layaab leh u baaqday